Rabi Raj Baral – Media Kurakani
October 17th, 2020 Rabi Raj Baral Media News No Comments
घटस्थापना (कात्तिक १) को दिन पारेर सुरु भएका अनलाइनहरूलाई बिहानै शुभकामना दिइयो । सुरुको सूचीमा थिए- इकागज डट कम र नेपालवाच डट कम । तर दिन ढल्दै जाँदा सूची लामै भयो । साँझसम्म आइपुग्दा ८ वटा समाचार पोर्टल र दुईवटा टेलिभिजन एकैदिन सुरु भएको भेटियो ।
December 22nd, 2019 Rabi Raj Baral Media Watch No Comments
प्रधानमन्त्री सचिवालयले हालसम्म प्रमको ट्‍वीटर ‘ह्‍याक’ भएको भनेको छैन । केबल पासवर्ड दुरुपयोग भएको आशंकामात्र भनेको छ । पासवर्ड दुरुपयोग कसरी भयो ? कसले गर्‍यो ? सम्भवतः प्रहरी अनुसन्धानको विषय यही हो ।
October 18th, 2019 Rabi Raj Baral Archives, Media Ethics, Media News No Comments
अहिले नेपाली समाज र सामाजिक सन्जाल हेर्यौँज भने सभ्यताका पर्खाल भ्वाङभुङ भत्काइएको छ । शिष्टता, मर्यादा केही पनि छैन । पत्रकारले बाउलाई पनि तपाईं भन्दैन । तिमीभन्दा माथि उठ्दैन । यो एउटा ट्रेन्ड हो । किनभने अंग्रेजीको ‘यू’ र अर्काको एउटा ‘यू’ भन्ने शब्द लोभ लागेर बालाई तपाईं भन्न गाह्रो…
March 16th, 2019 Rabi Raj Baral Feature Stories No Comments
तिमी चिन्दैनौ कोही जो कोही किताबमा छैन रे ऊ त्यही मान्छे हो बरै तिम्रो हिसाबमा छैन रे.. सीमावर्ती सहर काँकडभिट्टामा हरेक दुई वर्षमा हुँदै आएको कला साहित्य उत्सवको चौथो संस्करणमा यो गीत ‘कर्टेन रेजर’ थियो। कवि संगीत श्रोताले लेखेको र गायक अञ्जानबाबु, सौरभ एन्ड कम्पनीले गाएको यो गीतबाट उत्सवको पर्दा…